Comunicados archivos - Ny Diabe Eran-tany
Fandefasana ny WorldN martsa 2
Ity 2 tamin'ny Oktobra of 2019, ao amin'ny Circle of Fine Arts of Madrid, taorian'ny fanombohana ara-panoharana tamin'ny volana martsa tamin'ny km 0 an'ny Puerta del Sol, dia niseho tao amin'ny Circle of Fine Arts, ny hetsika ofisialy izay nanamarika ny fiandohany. . Nisy mpandahateny maro samihafa natrehina
Ny ampitson'ny nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana, dia nanana fahafahana i Pressenza, tamin'ny faran'ny fihetsika nananganana ny mariky ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatoniana miaraka amin'ireo tanora avy any amin'ireo sekoly samihafa any Madrid, hiresaka amin'ny mpandrindra azy. Rafael de la Rubia, avy ao amin'ny Humanist International Association, World
Ny fanokafana ofisialy ny 2 World March for Peace and Nonviolence dia natao tamin'ny Novambra 7 an'i 2018, nandritra ny Forum Iraisam-pirenena II momba ny herisetra an-tanàn-dehibe sy ny fanabeazana ho an'ny filokana sy ny fandriampahalemana, any Madrid. Ny volana martsa maneran-tany, 2, dia natolotry ny fikambanana iraisam-pirenena humanista Mundo sin Guerras
Aorian'ny folo taona amin'ny andiany voalohany, antenaina fa hiampita firenena maherin'ny zato amin'ny kontinanta dimy. Nandray ny fampisehoana tamin'ity diabe ity i Madrid, izay hanomboka ny 2 ny volana oktobra 2019 ary hifarana ny 8 ny volana martsa 2020. Tao no nanambarana fa Kolombia i Colombia